Mariazy Tajik Manetriketrika Manafina Akanin’ny Tetika Ambany Latabatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Novambra 2016 5:33 GMT
Dikasary avy amin'ny lahatsary YouTUbe navoakan'ny sampam-baovao Uzbekistan 24.
Ny lahatsoratra manaraka dia fiaraha-miombon'antoka avy amin'ny EurasiaNet.org. Nahazoana alalana ny famoahana azy eto indray.
Na izany aza, mety liana kokoa mikasika ny mombamomba sy ny tontolon'ny rain'ilay ampakarina ireo mpanara-baovao amin'ny fiasan'ny politika anatin'i Azia Afovoany, satria kely no fanta-bahoaka momba azy.
Saingy momba ny mariazy aloha. Niteraka fialonana na aiza na aiza i Madina Shokirova noho ny akanjony mikoriana mitentina 600 000 dolara nozairin'ny tranon-damaody Britanika avo lenta amin'ny zaitra Ralph & Russo. Araka ny notaterin'ny gazety mpanaitaitra antserasera life.ru, namboarina tamin'ny voaly maro sosona, nopetahana kofehy metaly sy noravahana volafotsy sy perla an'arivony maro ary kristaly Swarovski izany.
Araka ny mahazatra amin'ny lanonana tahaka izao, nanjary nampiala-voly ny vahiny ireo olo-malaza Rosiana nindramina sasany.
Ny rain'i Shokirova, Ilhom Shokirov no mandoa izany rehetra izany. Miharihary fa avy amin'ny fananany hotely marobe ny hareny – hotely lehibe karazany ambony ao amin'ny renivohitr'i Ozbekistan, ao Tachkent, sy hotely maromaro any ivelan'i Moskoa. Nitatitra ny life.ru fa manana ampaham-bola 65 isan-jato ao amin'ny toerana lehibe fivarotana sy fampialàna voly Demir ao Tachkent ihany koa izy.
Misy ny tombatombana fa misy ny lafiny ara-politika sy fitohizan'ny fanaon'ny taranaka olona ambony amin'ireo fanambadiana ireo.
Nitatitra momba ny tsaho ilay mpanoratra monina ao Khujand, miasa ao amin'ny ferghana.ru, vao haingana fa nanolotra ny zanany vavy hovadian'ny havan'ny filohan'i Ozbekistan, Shavkat Mirziyoyev i Shokirov. Tsy mazava avy hatrany izany, saingy mety ho filazana ny mariazy vao avy notontosaina tao Moskoa.
Ary tsy izany ihany no fampifandraisana nataon'i Shokirov. Araka ny fanamarihan'ny life.ru, nampanambady ny zanany lahy tamin'ny zanaka vavin'ny praiminisitra lefitra Ozbek, Rustam Azimov, izay nampahafantarina fa ho filoha manaraka tamin'izany fotoana izany i Shokirov tamin'ny taona 2010. Tokony hanohy handray andraikitra lehibe ao Ozbekistan i Azimov na dia eo aza ny fanjakazakan'i Mirziyoyev.
Nilaza mariazy iray hafa vao haingana tao Isfara avaratr'i Tajikistan, izay nokarakarain'i Shokirov ihany koa i Rustamov, mpanoratra ao amin'ny ferghana.ru. Azo antoka fa mety ity no dingana voalohany tamin'ny mariazin'i Madina Shokirova, satria matetika mandalo dingana maromaro manerana ny toerana samihafa ny mariazy lehibe karakarain'ireo Aziatika Afovoana mpanefoefo.
Amin'ny fanaovana tsoa-kevitra, azo atao ny mihevitra fa nokarakaraina noho ny mody fisian'ny fitsidihana tsy nampoizina nataon'ny solontenan'ny mpandraharaha Ozbek sy ny “mpikambana ao amin'ny intelligentsia (avara-pianarana)” tamin'ny 16-17 Oktobra tao amin'ny faritra Sughd ao Tadjikistan ity mariazy ity. Araka ny nolazain'ireo manampahefana ao amin'ny faritr'i Sughd tamin'ny RFE / RL, Radio Ozodi amin'ny teny Tajik, nanao fitsidihana tao Khujand sy Isfara ireo mpandraharaha mba “hizatra amin'ireo asan'ny orinasa indostrialy, tranombarotra sy fikambanana ara-kolontsaina ao amin'ny faritra».
“Tsy nampoizina, saingy nahafinaritra ny fitsidihana”, hoy i Muzaffar Yunusov, mpitondra tenin'ny fitantanana ny faritra Sughd tamin'ny Radio Ozodi.
Na dia manana ny ankamaroan'ny tombontsoany ara-barotra ao Ozbekistan sy Rosia aza i Shokirov, manana fiaviana ao Tadjikistan ihany koa izy, izay voalaza fa tao no niaviany, na dia fantatra miharihary aza fa nonina ela be tao Rosia izy. Raha ny marina, nanana olana tao Tadjikistan i Shokirvo tamin'ny fotoana lasa, izay mety manazava ny ampahan'ny hafetsifetsena tamin'ny mariazy tao Isfara.
Nisy ny fanazavana mahaliana nomen'ny gazety Rosiana Novaya Gazeta, nivoaka tamin'ny taona 2002. Na dia lavitry ny fotoana tokony hirotsahan'ny filoha tadjik Emomali Rahmon hofidiana indray aza izany, efa nijery izay mety ho mpifanandrina aminy sahady izy, hoy ny gazety.
“Ohatra iray ny tantaran'i Ilhom Shokirov, izay, tsara ho fantatra fa manampahefana ambony ao amin'ny fitondrana Rosiana (!). Niditra tao an-tsainy ny zava-dratsy fa te hiverina ao an-tanindrazany mana-tantara izy mba hitsidika ny ray aman-dreniny”, araka ny nosoratan'ny gazety.
Saingy tamin'ny fahatongavany tao Tadjikistan, nosamborin'ny mpitandro ny filaminana i Shokirov ary nogadraina tsy nomena mpisolovava.
-Nahoana no nosamborini'zy ireo izy? Satria fotsiny araka ny fiheveran'izy ireo, nikasa handray anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena manaraka i Shokirov. Na te-hanohana olon-kafa te-haka ny toeran'i [ Rahmon] izy tamin'izany», hoy ny gazety tsy nanambara ny loharanom-baovaony.
Notohizan'ny gazety Novaya Gazeta fa tsy tafahetsika nandritra ny dimy volana fara fahakeliny tao Tadjikistan i Shokirov, ary tsy nahenoana feo avy amin'ny fanjakana Rosiana.
“Nilaza izy ireo fa mirehareha ny filoha [Rahmon] fa manana Rosiana ao amin'ny efitra famonjany:” Mihevitra ny rehetra fa saribakolin'i Kremlin izahay, kanefa misy manampahefana ambony Rosiana ao amin'ny fonjanay. Ary manaiky tsy fidiny amin'ny fisian'izany izy ireo”, hoy ny gazety Novaya Gazeta, milaza ny fihetsika mahatalanjona nataon'i Rahmon heverina ho ara-dalàna.
Na izany aza, navotsotra i Shokirov avy eo ary nanohy nanao zavatra lehibe, saingy sarotra ny tsy hieritreritra fa tsy manana lolom-po amin'ny mpanagadra azy taloha izy, izay mahatonga ny mariazy tao Isfara ho miavaka sy mahatalanjona kokoa.
Amin'ny zavatra vitsy fantatra amin'ireo zava-misy sy ampahan-javamisy voatantara an'aterineto ity, dia misy tombatombana maro hafa tsy voafehy azo lazaina koa. Mpandraharaha mpanefoefo voalaza fa manana fifandraisana amin'ny fitondrana Rosiana, fifandraisana ara-pianakaviana akaiky amin'ny olona manam-pahefana indrindra ao Ozbekistan ary manana olana amin'ny mpitarika ao Tadjikistan? Inona no mbola mahaliana kokoa?